Ny hafanana na tsingerina mahery vaika ao amin'ny mares | Soavaly Noti
Hafanana na haingam-pandeha ao anaty mares
Carlos Garrido | | fandikana
Miditra ny soavaly hafanana amin'ny lohataona na amin'ny fiandohan'ny fahavaratra, izany hoe polyestric vanim-potoana, izay midika fa tsy hiditra amin'ny hafanana mihitsy mandritra ny fararano na ririnina. Ny fotoana voalohany alehany amin'ny hafanana dia 18 volana, na dia ampirisihina aza izy tsy hanambady mandra-pahatongan'ny 3 taona mba hiterahany ny zaza voalohany amin'ny efa-taona.
La Ny vanim-potoanan'ny fiterahana na ny hafanan'ny vavy dia maharitra 21 sy 23 andro ary tsy ara-dalàna izy ireo, satria misy tsingerina roa izy io. Misy 14 andro fantatra amin'ny anarana hoe tsingerin'ny anestra mandritra ny fotoana tsy anaovan'ny vehivavy hafanana ka noho izany dia tsy manaiky ny lahy fa io dia fotoana fiomanana hivoahan'ny embryon, ary ny tsingerin'ny estrous rehefa tena mafana ny vavy, ary miditra amin'ny ovulation izay maharitra roa andro. Maharitra 5 ka hatramin'ny 7 andro ity tsingerina ity ary rehefa manaiky ny lahy ny vavy ary afaka mamboly ny ovum.
Mazava be ny famantarana ny hafanana. Ny vehivavy dia mimiaka matetika ary mivoaka ny moka mivoaka avy amin'ny fivaviany ary, ambonin'izany rehetra izany, dia miseho izany faniriana lehibe hanambady nefa manaiky ny lahy. Mikasika ny fihetsika dia azo jerena fa ny soavaly eo anatrehan'ny soavaly dia mampiseho ny lamosiny hiverina, mandaka, manandrana manaikitra azy.
Etsy ankilany, ny soavaly dia manintona ny vavy satria mamoaka pheromones izay misy ao amin'ny urine izy. Manomboka koa izy io karazana fiarahana amin'ny vehivavy.
Mandritra ny fotoana maharitra ny tsingerin'ny estrous, mampiseho ilay rambony miakatra ny soavaly, clitoral flickering, vozon-tranonjaza vozon-tranonjaza ary mamontsina lalan-dra. Hormonina mandrisika Follicle sy estrogen no manjakazaka. Amin'ny vanim-potoanan'ny ovulation dia manjaka ny hormonina luteinizing.
1 Inona ny cycle cycle
2 Ahoana ny fihodinan'ny tsiranoka ao amin'ny mares?
3 Famantarana ny hafanana ao anaty mares
4 Famantarana fa tsy ao anaty hafanana ny soavaly vavy
5 Soavaly anaty hafanana miaraka amina haza
6 Fanambadiana amin'ny mares
Inona ny cycle cycle
Rehefa miresaka isika oestrusIzahay dia miresaka momba ny tsingerim-pananahana, izay azontsika faritana ho toy ny andiam-panovana ara-batana sy fisehoan-javatra izay mitranga ao anatin'ny ovaire ao anatin'ny vanim-potoana tsingerina noho ny fiovaovan'ny haavon'ny hormonina.
Tandremo fa tsy mitovy izany oestrus fa ny tsingerin'ny fadim-bolana, mahazatra ny olombelona. ny oestrus Miseho izy io arakaraka ny vanim-potoana amin'ny taona, ny toetran'ny mari-pana, ny sakafo, ny fisian'ny fofona lahy, taona ary fampinonoana.
Ahoana ny fihodinan'ny tsiranoka ao amin'ny mares?
Ny vavy dia iray amin'ireo biby voatanisa ao polyesters fizaran-taona. Ity vondrona ity dia misy ny zavamananaina rehetra izay manana vavy manana sikile estrous photoperiod lava (fotoana manjary maizina any aoriana ary lava kokoa ny andro antoandro).
Ity tsingerin'ny estrous ity dia maharitra 21 andro tanteraka ary mampiseho soritr'aretina hafanana mandritra ny dimy andro na mihoatra. Ny fihodinana dia mety mitranga manodidina ny hafanana farany na hafanana.
Ny estrus voalohany matetika dia mitranga amin'ny 15-24 volana, miankina amin'ny karazany, ary manomboka amin'ny lohataona ka hatramin'ny fararano.
Famantarana ny hafanana ao anaty mares
Mafana ny soavaly rehefa malina ara-nofo ny lahy. Hita izany amin'ny fandinihana raha mampiseho fihetsika na famantarana maromaro ny vavy:
Miseho amin'ny fomba iray izy io be fitiavana, mametraka ny sofin'izy ireo amin'ny toerana misy ny saina. Milamina ny fihetsiny, mijanona eo foana ary manandrana manimbolo ilay lehilahy.
Mampiakatra hatrany ny rambony amin'ny asehoy ilay vava. Mety tsy hitranga izany fihetsika izany raha mahery setra ny lehilahy manodidina anao.
Rehefa eo akaikin'ny soavaly soavaly izy, dia mikiaka mba fandroahana andiana fofona any ivelany izany dia mampahafantatra ny lahy fa mahay mandray izy. Ho fanampin'izany dia miaraka amina ranon-javatra manosotra ny taovam-pananahana anao koa ity fisotrony ity. Zava-dehibe ny fahalalana fa tsy ara-dalàna ity fisotrony ity fa maizina sy matevina kokoa noho ny mahazatra.
Ahodin-dry zareo ny molotry ny vava aharihary ny clitoris.
Tonga amin'ny toerana ahitàny ny vodiny izy sorohy ny valahana. Toy ny taloha amin'ny rambony, raha mahery setra ny soavaly dia tsy hataony.
Marina fa tsy misy dikany ny mamantatra ny hafanana amin'ny soavaly vavy, fa tsy misy, tsotra. Tsy ny famantarana rehetra voalaza no mitranga, satria tsy mitovy daholo ny mara. Mety hitranga ihany koa izany, zavatra tena mahazatra, fa tsy misy soavaly entina manaitaitra azy amin'izay fotoana izay ary hamaritana raha mafana na tsia izy.
Raha tsy manan-janakalahy ianao dia ilaina ny mitahiry ny firaketana ny vanim-potoanan'ny hafanana, ny tsiranoka ary ny sisa.
Misy ihany koa ny mety hoe avy ny soavalintsika karazana passive, izay midika fa tsy mampiseho fihetsika tsara na ratsy amin'ny lahy. Ireo mares ireo, indraindray, dia mamela azy ireo hosaronan'ny soavaly nefa tsy hafanana. Mitranga izany raha vao miditra na miala ao anaty rongo ilay soavaly.
Famantarana fa tsy ao anaty hafanana ny soavaly vavy
Mifanohitra amin'ny zava-mitranga amin'ny vanim-potoana mafana, rehefa tsy ao anatiny intsony ny vavy, ny fitondran-tenany amin'ny fitsipika ankapobeny dia: masiaka amin'ny ezaky ny lahy hiakatra, tsy manongilana ny valahana Ary tsy manasaraka ny vodin-trano, tsy manainga ny rambony ary mety hahatratra aza manaikitra ary daka mankamin'ny soavaly.
Izany rehetra izany dia mitranga mandritra ny 48 ora manaraka aorian'ny atody atody, na bevohoka ny vavy na tsia.
Soavaly anaty hafanana miaraka amina haza
Toy izany koa no mitranga amin'ny vehivavy, ny lehilahy koa mahita ny fiovan'ny toetrany rehefa mafana izy ireo, ary betsaka kokoa raha misy soavaly akaiky azy ireo.
Iray amin'ireo famantarana tsy azo lavina fa soavaly lahy no mafana dia ny relinchos, izay lasa mitohy bebe kokoa, lava ary amin'ny endrika avo kokoa sy mahery.
Santionany iray hafa tsy azo diso koa ny dihy tanterahin'ny soavaly soavaly, izay misy sary amin'ny boribory karazana amin'ny boribory ary na dia mitsambikina kely aza. Ity dihy hafahafa ity dia mampiseho ny fanirian'ny lehilahy hanarona ny vavy, fa koa ny tahotra mafy ny holavina.
Fanambadiana amin'ny mares
Fotoana kely alohan'ny mitaingina azy, ilay lahy, izay efa nahazo ny fankatoavana ny soavaly, dia nibolisatra moramora ny fehin-tsoavaly sy ny hatony, sady nikosoka ny tenany. Manaraka izany, manofoka ny faritra aoriana amin'ny soavaly vavy izy, milelaka ny rambony sy ny tongony. Rehefa vonona ho sarona ilay vehivavy dia esoriny lavitra ny rambony.
Tena ilaina izany alao antoka fa ny filan'ny soavaly dia araka ny tokony ho izy tamin'ny fotoanan'ny tendrombohitra. Mety maharitra fotoana fohy ny fametrahana azy, na izany aza tsy misy ny fanaovana tahaka. Miaraka amina hetsika vitsivitsy monja dia afaka mivoaka ny lahy. Ity dingana ity dia afaka mihodina 13 segondra.
Raha ny mahazatra dia soavaly no maka tahaka, raha be indrindra, In-3 amin'ny andro iray ihany. Na dia misy aza ny fotoana izay mbola itadiavan'ny soavaly vavy ny lahy miaraka amin'ny tanjona ho sarona indray, ary manaiky indray izy.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra azy, ny filohan'ny soavaly dia mety hahatratra iray metatra sy sasany metatra ny fananganana azy, izay manohana ny fientanentanan'ny ampondra vavy afaka segondra vitsy monja.
Manantena izahay fa afaka nanazava fisalasalana sasantsasany izay azo inoana fa nipoitra rehefa nandinika ny mety hampitambatra ny vadinay izahay.
Iray amin'ireo traikefa nahafinaritra ho an'izay rehetra manomboka amin'ny maha mpankafy azy eo amin'ny tontolon'ny soavaly dia, tsy isalasalana, ny brood. Na dia toa tsotra aza izy tamin'ny voalohany, dia mety ho lasa sarotra ny fiterahana.
Ilaina ny manana andiana fahalalana teo aloha, indrindra mifandraika amin'ny toetran'ny hafanana amin'ny soavaly. Mahazoana fifandraisana manokana amin'ny tranga vehivavy.
Manantena izahay fa amin'ny torolàlana ho an'ny vanim-potoana fiterahana na tsingerina amin'ny soavalivavy, ary koa miaraka amin'ny torohevitra handraisana izany dia afaka mahomby amin'ny tanjonay hahazo zanaka amin'ny soavalinay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » fandikana » Hafanana na haingam-pandeha ao anaty mares
Salama hariva dia tiako ny fampahalalana ary tena nilaina izy io
Salama alina, nanarona ny tenany ny soavaliko 42 andro lasa izay, androany izy dia nanomboka nitaratra ilay vava ary matevina ny urine, ara-dalàna izany, azo inoana fa tsy bevohoka tao izy.